Sida loo tabobaro Travel In Europe Iyadoo Thalys | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Sida loo tabobaro Travel In Europe Iyadoo Thalys
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo(Last Updated On: 18/09/2020)
Safraya Europe waa riyo ii rumowday, waayo, sidaas badan. Oo haddii aad tahay nasiib ku filan oo ay fursad u leeyihiin inay sax caga this off liiska baaldi aad oo arag oo dhan meelaha ugu fiican Yurub, aad rabto doonaa si ay u dhigi waayo aragnimo sida xusuus badan ee suurtogalka ah. So pay attention to how to Train Travel in Europe with Thalys.
safarka tareenka waa habka ugu savviest in tuujin badan oo meelaha Yurub. Thalys waa khadka tareenka xawaaraha sare ku socda ee kugu geyn kara dhammaan magaalooyinka waaweyn qaab ahaan iyo xawaare ahaanba adiga oo aan waxyeellayn amnigaaga..
Hel Inaad Ogaato caanka ah "Red Tareen"
Marka aad tabobaro Travel in Europe la Thalys, tareenada ayaa waxaa loo yaqaan "The Tareen Red" for midabka cas firfircoon ee ay engine, taas oo ah khadka tareenka xawaaraha sare leh ee kugu xidhi kara adiga 17 magaalo oo ku yaalla Western Europe raaxada. line The Thalys ka kooban yahay tareeno-xawaaraha sare ee French-Belgian, adeegaya Amsterdam via HSL ah. Iyadoo Brussels adeegaya sida xarun ee khadka, aad gaari kartid magaalooyinka waaweyn ee Yurub sida Paris, Liege, Amsterdam, Antwerp, Cologne, iyo Hague.
Kuwani tareenada-xawaaraha sare safri xawaare ah 300 km saacadiiba. line tareenka waa sirta tago ka Brussels Paris in ka yar saacad iyo badh ah. Iyo in aad Amsterdam ka Paris guuri kartaa jidka oo dhan in oo kaliya 3 saacadood oo 20 i! Thalys waxa uu ka dhigayaa in ka badan 50 wareegsanaa safarada tareenka maalin kasta. Waxaa jira 27 Tababar maalin ordaya ah Paris - wadada Brussels oo keliya.
Doorashada Class Xuquuqda
Waxay leeyihiin saddex fasal adeegga uu ka soo xusho marka aad tareenka ku socda Yurub la Thalys - Standard, raaxada, iyo Premium.
Labada raaxada iyo fasalada Premium bixiyaan "fasalka 1aad" fadhiga halkaas oo aad ku raaxaysan karaan safarka tareenka raaxada kuraasta dangiigsan raaxo leh in ay bixiyaan legroom more. foorari ee doorashada Premium waa in shaqaalaha tareenka ee u adeega aad cuntada iyo cabitaanka aad kursiga. Waxaad sidoo kale yeelan doontaa helitaanka cuntaqda Thalys ee Paris iyo Brussels.
kursi ee raaxada iyo Premium ee loo qoondeeyey in a 2 + 1 hannaankii. Oo Kabiin kasta, waxaad ka heli doontaa 1 miiska fadhiya, taas oo kaamil ah ee u socdaalaya lammaanaha. Standard ama kuraasta "class 2aad" waa in a 2 + 2 hannaanka guud ahaan gaariga.
fasalada oo dhan bixiyaan internet WiFi saarnaa, marin-u-helka baarka, iyo korontadaada gaarka ah ee loogu talagalay deeruhu in qalabka aad.
Gadashada Tigidhada for tareenka ku socda Yurub la Thalys
Waa khasab in la sameeyo Boos tareen haddii aad rabto in ay ku socdaalaan tareenka Thalys. The Thalys trains are high demands so make sure you book your train ticket as much as possible in advance.
Waxaad ballansan kartaa kuraasta aad ku Thalys ilaa 90 maalmood ka hor. Oo haddii aad Ballansan Your Tareen Ticket Hore, waxaad badbaadin kartaa ilaa 75%!
To make reservations to Train Travel in Europe with Thalys, Book A Tareen Online. Waxaan la Thalys shaqeeyaan si loo hubiyo in aadan ku amray wixii kharash jaale iyo aad u hesho qiimaha ugu macquulsan.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit leh link si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-europe-thalys%2F - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#traveleurope europetravel trainjourney Tranride tareenada caarada tababarka talooyin tareenka tareen safarka Talooyin safarka tareenka safarka tareenka safarka travelbelgium travelfrance travelgermany dalxiiska travelnetherlands traveltips
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Belgium, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe